OMN: ዶ/ር ብርሃነመስቀል – ህገወጥ መንግስታዊ ውንጀላ – Kichuu
HomeNewsAfricaOMN: ዶ/ር ብርሃነመስቀል – ህገወጥ መንግስታዊ ውንጀላ
OMN: ዶ/ር ብርሃነመስቀል – ህገወጥ መንግስታዊ ውንጀላ
OMN: Oduu Ijoo (Fulbaana 22, 2020)
Kan asiin dura weerara dhibee Corona sababeeffachuun yeroo hin beekamneef dabrfamee ture Filannoon Biyyaalessaa Itoophiyaa kan marsaa 6ffaa bara kana gaggeeffamuu qaba jechuun murtoon darbuun gabaafame. Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa guyyaa har’aa wal gahii gaggeesseen filannoodhaaf qophiileen barbaachisan amma irraa eegaluu qaba jechuun murtee dabarsuu isaa Miidiyaaleen Biyyattii gabaasaa jiran.
Filannoon Itoophiyaa baatii Hagayya bara 2012 A.L.H’tti ni gaggeeffama jechuun Boordiin-Filannoo Biyyaalessaa beeksisee turus, Mootummaan garuu dhibee Corona dahoo godhachuun filanicha yeroo silaa jedhametti osoo hin gaggeessin dabarsee ture.Filannoon kun baatii kamitti akka gaggeeffamu wanti ibsame hin jiru.
“Mootummaan weerara dhibee Corona sababa godhachuun seeraan ala Taayitaa gubbaa turuuf jecha diraamaa hojjataa jiruudha malee, tamsa’inni Vaayirasii Corona kan durii caalaa waytii ammaa Itoophiyaa keessatti hammaatee jira” jechuun komiin bal’inaan Ummata keessaa dhagayamaa jira. Naannoon Tigraay torbaanuma darbe Filannoo Naannichaa gaggeessuun xumuruun isii kan yaadatamuudha.
Wallo Aanaa Baatetti Guyyaa har’ aa hidhatoota Mootummaan gara daangaa Affaariin horsiisee bultoota Oromoo Walloo irratti bobbaaseen lubbuun nama tokkoo battalumatti rasaasa itti dhukaafameen darbitee jirti.
Namni hidhattootan ajjeefame kun maqaan isaa Abdullee Liibaan nama jedhamu yoo ta’u, Abbaa Maatii torbaa akka ta’es ibsameera. Weerarri kun erga nurratti baname waggaa 6 ol lakkofsise jira kan jedhu jiraataan Walloon irraa bilbilaan dubbifne kun,hangaa oduu tana qindeeffannetti lolli hawaasa fi humnoota kanneen giddutti gaggeeffamaa jiru kun itti fufe jira jedhan. Achuma Aanaa Baatee gandoota gara garaa keessatti Liyyuu-Hayiliin Naannoo Amaaraa maqaa Shanee deeggartu jedhuun Dargaggoota hedduu mana hidhaatti guuraa akka jiranis maddi keenya kan Walloon irraa odeeffanne kun itti dabaluun himeera.
Siidaan yaadannoo Artist Hacaaluu Hundeessaatiif Yuunivarsiitii Amboo Kaampaasii maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin moggafame fulduratti tolfamee ture osoo hin eebbifamin hafuun isaa ni yaadatama. Ijaarsi Siidaa kanaa baasii Barsiisotaa fi hojjattoota bulchiinsaa Yuunivarsiitii Ambootiin kan hojjatame yoo ta’u, Pireezdaantiin Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa akkaataan Siidaan kun itti dalagame waan isaaniif hin liqimfamneef osoo hin eebbisisin hafeera.
Falakaan Siidaa kanaa, Hacaaluun Farda yaabbatee sakarsiisaa jiraachuu kan agarsiisu yoo ta’u, kotteen lamaan fulduraa farda kanaa ol ka’ee mul’ata jedhameera.
Mootummaan ammoo “Siidaan kun kan Minilikitiin waan wal fakkaatuuf,
leelliftoota Miniliki nurratti kakaasa jechuun waan Haacaaluun,waa’ee Farda Siidaa Dabalee sirba “Maalan jira?” jedhu Keessatti kaase sanaaf nama deebii laate nu fakkeessa, Kanaaf fardicha jijjiiraa; yookaan ammoo siidaa kana guutumatti achii kaasaa.” jechuun Hooggansa Yuunivarsiitii Amboo irratti Mootummaan dhiibbaa godhaa jiraachutu himamaa jira.
Godina Harargee Lixaa Aanaa Gubbaa Qoricha magaalaa Kommona jedhamtu keessatti hidhaan Hammaachaa Dhufuu iraa kan ka’e hawaasni Naannichaa rakkoo nageenyaatiif saaxilamaa jirra jechuun dubbatan.
Yeroo ammaa Dargaggoonnii Magaalatti keesssaa baqatanii Gandoota baadiyaa fi bosona keessaa dhokatanii jiru jechuun
jiraattota keessaa namni garasii bilbilaan dubbifne OMN’tti himeera
Magaalaa Kommona keessaatti Namoota Paartii Biltsiginnaa hin deeggarree fi kanneen Alaaba Adda bilisummaa Oromoo qabatanii deeman yoo argan gaafii tokkoon maletti loltoonni Mootummaa adamsuun hidhatti darbataa jiru jedha.
Aanichatti Qeerrowwan mana keessatti dararamaa jiran keessaa Dargaggoo Feeysal Mohammed jedhamu kan Kitaaba “The hijacked Revolution” jedhu kan Afaan Amaaraatiin barraahe ture gara Afaan oromootti hiikee tures Magaalaa Kommona kanatti hidhamee hiraarfamaa jira jedha maddi keenya Harargee lixaa irraa OMN’f yaada laate.
Godina Baalee Aanaa Agaarfatti Waraanni Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Poolisoonni Addaa Oromiyaa waliin ta’uudhaan ummata nagayaa dararuu fi hidhuu itti fufanii jiru jedhan jiraattonni. Erga gaafa Artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee kaasee sababa waajjiraalee Mootummaa gubdan jechuun Abbaa Gadaa Aanaa sanii dabalatee Qeerroo fi Qarreen, Haawwan, Manguddoota biyyaa fi Abbootii Amantaa Islaamaa hidhatti guuraanii akka jiran himameera.
Manneen hidhaa Aanichaa guutuun Mana Barnoota keessatti namoota 500 ol hidhanii jiraachuu himuun, warroota hidhaman kanneen keessatti Miseensonni Paartii KFO hedduminnaan akka argamanis ibseera maddi keenya Baalee kun.
Namoota Manni Murtii mirga wabiitiin akka bahaniif ajaja dabarsees kaadireen Aanichaa dhoowwuun manuma hidhaa keessatti dararamaa jiran jedhameera.
Baratoonnii Oromoo kanneen Barnootaaf Yuunivarsiitiwwan Naannoo Amaaratti ramadaman hanga Mootummaan Seera-qabeessa ta’e ummatan filamee biyyi nagaa taatutti, Barnootaaf garasitti akka hin imalle jechuun dhaaman Qeerroon Harargee lixaa magaalaa Asabot irraa bilbilaan OMN’f yaada laatan. Hayyoonni keenyaa falmattoota haqaati malee shorarkeessitootaa miti waan ta’eef, Mootummaan himata shororkeessummaa kan OMN dabalatee hoggantoota Siyaasa Oromoo irratti bane ni balaaleffanna, hatattamattis kaasuu qabas jedhan. Fulbaana 30’n booda Mootumman bu’uura seera qabu waan hin jirreef Ummanni Oromoo Tokkummaan ka’ee Mootummaa mataa isaa dhaabbachuuf of qopheessuu akka qabus himaniiru.
Qeerroon dubbifne kun itti fufuun Ayyaana irreecha baranaa namota muraasa qofatu irratti hirmaata jechuun ololli kaadiree isaaniitiin lallabamaa jiru nu biratti fudhatama hin qabu waan ta’eef, Nuti Qeerroon Harargee lixaa Ayyaanicha bifa qindoomina qabuun gaggeessuuf qophii hundaa xumurree jirra jedheera.
Dilbata darbe Fulbaana 20/2020 Magaaloota akka Awwadaay fi Haramayaatti dabballoonni Mootummaa dirqamaan hawaasa wal-tajjii waamuun Mootummaa kana deeggaruu qabdu jechuun ummatatti dirqama laachaa kan turan ta’uun himame.
Wal-tajjii kana irratti Poolisoota humna addaa Oromiyaa fi Waraana Raayyaa ittisa biyyaa kanneen naannawa san qubatanii turaniif badhaasni Addaa kan galateeffannaa waraana kanaaf kennamee jira jechuun Qarreen Wal gahii kana irratti hirmaatte takka OMN’tti bilbilaan himtee jirti.
Warreen badhaasa addaa argatan kunneen baay’inni isaanii namoota 900 ol akka ta’an himuun, jarri kun bara Mootummaa wayyaanees ta’e amma warra lubbuu Qeerroowwan Oromoo galaafachaa tureedha jetti Qarreen dubbifne tun. Qaamni badhaasicha kenne Naannoo Oromiyaa irraa dhufuun dabbaloota Mootummmaa kanneen Godinicha keessa jiran waliin ta’anii mata duree “Warra Rasaasaaf adda isaa kenne” jedhuun sagantaa qopheessanii baadhasa laachaaf turan jedhameera.
OMN: Mixmixni harkaan dhaabaniin nama gubdii jedha Oromoon (Documentary) OMN Melbourne ( Ful 22, 2020)
ERGAA ARIIFACHIISAA ACTIVIST FI FALMITUU mirga Sabaa dhimmoota haala yeroo irratti dabarsite
አማርኛ ዜና – የአገው ህዝብ በክልሉ ልዩ ሃይል እየታሰረ፣ እየተደበደበ እና እየታፈነ መሆኑን ተገለፀ። መስከረም 11/2013 ዓ/ም